အမြဲတမ်း မျက်မှန်မတပ်ချင်ရင် ဒီဆေးနည်းလေးကို သုံးကြည့်ပါ... - Barnyar Barnyar
အမြဲတမ်း မျက်မှန်မတပ်ချင်ရင် ဒီဆေးနည်းလေးကို သုံးကြည့်ပါ…
May 26, 2022 thanzin laypyay KNOWLEDGE 0
အမြဲတမ်း မျက်မှန်မတပ်ချင်ရင် ဒီဆေးနည်းလေးကို သုံးကြည့်ပါ...
“ ဆရာ မျက်မှန် မပါပဲ လမ်းတွေလျှောက်။ စာတွေဖတ်နဲ့ပါလား” “ကျွန်တော် မျက်စိမမှုန်တော့ဘူးဗျ” “လုပ်ပါဦး ဆေးနည်း ကောင်းလေး”
“ ခပေါင်းရေကြည် အခေါက် ( ၁၀ ) ကျပ်သား လောက်ကို ထန်းလျက် ( ၃ ) လုံး ၊ ရေ မတ်ခွက် ( ၉ ) ခွက်နဲ့ ရောကျိုပြီး အအေးခံတယ်… ။ ပြီးမှ အရည် စစ်ယူပြီး ပုလင်းထဲ ထည့်ထားတယ်… ။
နေ့တိုင်း လက်ဖက်ရည် ပန်းကန် တစ်လုံးစာ သောက်တယ်… ။ ဆေးကုန်ရင် နောက်တစ်ခါ စီမံပြီး မပြတ် မှီဝဲတယ် ။
˝ နောက်တစ်နည်းလည်း လုပ်တယ်… “အဲ့ဒါ ဖန်းခါးသီးကို အမှုန့်လုပ်ထားတာ။ တစ်ပတ် (၂) ကြိမ် ဖန်ခါးမှုန့်နဲ့ နနွင်းမှုန့် စစ်စစ်ကို ရေနဲ့ ရောစပ်ပြီး ညအိပ်ချိန် ကွင်းပြီး အိပ်တာပဲ။ မျက်ရည် ပူကျတာ၊ မျက်စိအောင့်တာ၊ အမြင်ဝေဝါး မျက်စိမှုန်တာ မဖြစ်တော့ဘူး။˝
ပင်လတ်မျိုးဖြစ်သည်။ အခေါက် မှာ မီးခိုရောင် ဖြစ်သည်။ အပွင့်သည် ဖြူ၍မွှေးသည်။ အသီးသည် ဆီးဖြူသီးအရွယ်ရှိ၍ မှည့်လျှင် သပြေရင့်ရောင်ဖြစ်ကာ အစေ့တစ်စေ့သာရှိသည်။ အရွက်မှာ ခပေါင်းရွက်နှင့် တူသော်လည်း ခပေါင်းရွက်ထက်များစွာသေးသည်။
“မျက်စိ သွေးခြေတည်”: : ခပေါင်းရေကြည်စေ့ကို သွေး၍ မျက်စိကွင်းပေးလျှင် ထိုရောဂါ ပျောက်သည်။ အခြားသော မျက်စိနာဟူသမျှ ထိုနည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ပေးပါက ပျောက်ကင်းသည်။
“မျက်စိမှုန်” : : ခပေါင်းရေကြည်စေ့ကို သွေး၍ မျက်စိကွင်းပေးပါက မျက်စိ မှုန်ဝါးခြင်း ကင်း၍ အမြင်သန်လာပါလိမ့်မည်။
“မျက်စိ တိမ်သလာ”: : ယင်းအစေ့ကို ပျားရည်နှင့်သွေးကာ မျက်စိအား ကွင်းပေးပါက မျက်စိတိမ်သလာရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။
ခပေါင်းရေကြည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အခြားပျောက်ကင်းစေသော ရောဂါများလည်း ရှိနေသေးပါသည် ။ အဓိက မျက်စိရောဂါကို ပျောက်ကင်းကြောင်း အရှင်နာဂသိန်ဆေးကျမ်းတွင် ညွှန်းဆိုသည်။Credit: ယမင်းဖြူ,
“Flowers From Myanmarမှာ ရေးသားထားတာကိုလည်း ကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်…”
ခပေါင်းရေကြည် ဆိုသော အမည်နှင့် လိုက်အောင်ပင် အစေ့သည် “ရေ”ကို ကြည်လင်နိုင်စွမ်းရှိသော အစွမ်းရှိသည်။ “ရေကြည်အောင် ပြုလုပ်နည်းမှာ ရေထည့်ထားသော အိုးအတွင်းဖက် ဖင်ပိုင်းကို ခပေါင်းရေကြည်စေ့ဖြင့် တိုက်ပေးပါ ။
ထိုအခါ အစေ့မှ အဖတ်ကလေးများသည် ရေထဲသို့ ပါသွားကြသည်။ အစေ့မှ ထွက်သော အဖတ်ကလေးများသည် ရေထဲရှိ မြူမှုန်၊ ညွန်နှစ်များကို သယ်ယူ၍ အနည်ထိုင်သွားသောအခါ ရေသည် ကြည်လင်သွားသည်။ ထို့ပြင် အစေ့ဟာ မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးမှာ ဆေးဖက်လည်း ဝင်လှသည် ။ ခပေါင်းရေကြည်စေ့၏ အခွံကို အမှုန့်ပြုလုပ်၍ အန်ဆေးအဖြစ် သုံးနိုင်သလို ၊ ဝမ်းကိုက် ပျောက်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ခပေါင်းရေကြည်ပင်၏ အမြစ် ၊ အသီး ၊ အစေ့များက ဆေးဖက်ဝင်လှသည်။ website များမှာ ရေးသားထားသော ဆေးဝင်ပုံများကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းရင်းဆေးအသုံးပြုပုံ : Ayurveda ရဲ့အဆိုအရ အစေ့များသည် acrid , alexipharmic, lithotriptic ဖြစ်ပြီး ။ strangury၊ ဦးခေါင်းရောဂါများ၊ Urinary discharges ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါများကို ကုသနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ အမြစ်သည် အရေပြားရောဂါ Leucoderma ကို ကုသနိုင်သည်။ အသီးသည် eye diseases မျက်စိရောဂါများ, thirst ရေငတ်ခြင်း, poisoning အဆိပ်သင့်ခြင်း နှင့် hallucinations စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း စသည့်ရောဂါများ ကုသရာတွင်အသုံးဝင်သည်။
အသီးသည် emetic အန်ဆေး, diaphoretic alexiteric ဖြစ်သည်။ Unani system of medicine ၏ ဆေးပညာအရ အစေ့များသည် bitter ခါးသက်သော , astringent ချုပ်သော to bowels, aphrodisiac ကာမအားတိုးဆေး။ , tonic အားဆေး , diuretic ဆီးရွှင်ဆေး ။ အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ် ရောဂါများအတွက် အကောင်းဆုံးဆေးဝါး ၊ gonorrhea ကာလသားရောဂါ ၊ , colic ပြင်းထန်သော။ ဝမ်းရစ်နာခြင်း စသော ရောဂါများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။credit: Flowers From Myanmar, https:// www. facebook. com/360042720833435/ posts/ 947281468776221/
“ဝီကီပီဒီးယားတွင်လည်း ယခုကဲ့သို့ ဖော်ပြထားသည်။”
ခပေါင်းရေကြည်ကို ရုက္ခဗေဒသညာ အားဖြင့် စထရိခနို့ပိုတက်တိုရမ် (Strychnos potatorum) ဟုခေါ်သည်။
ခပေါင်းရေကြည်ပင်သည် ရေကို ကြည်လင်နိုင်စွမ်းသော အစေ့ရှိ အသီးသီးသော အပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအပင်မျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံ ပဲခူးနှင့် တောင်ငူခရိုင်များတွင် အများအပြား တွေ့ရသည်။ အသီးတွင် အစေ့ တစ်စေ့သာ ပါသည်။
အပင်မှာ ရွက်ကြွေပင်ကြီးမျိုးဖြစ်သည်။ ပေ (၄၀) ခန့် အထိမြင့်သည်။ မီးခိုးရောင်အခေါက်ရှိပြီး အခေါက်တွင် အမြှောင်းများပါသည်။
အရွက်မှာ ဘဲဥပုံ ရှည်မျောမျော ရှိ၍ အရွက်ထိပ်ပိုင်းမှာ ချွန်သွယ်ပြီး ရွက်အရင်းပိုင်းမှာ သွယ်သည် သို့ ဝိုင်းသည်။ ရွက်ပြားချော၍ အစိမ်းရင့်ရောင် ရှိပြီး ရွက်အနားတွင် အတွန့်များရှိသည်။
အပွင့်မှာ ဖြူပြီး မွှေးသည်။ ပွင့်ညှာအလွန်သေးပြီး အပွင့်တွင်း အမွှေးများ ရှိကာ ခေါင်းလောင်းပုံ ဖြစ်သည်။ အစေ့မှာ တစ်လက်မ၏ ၄ ပုံ ၁ပုံမှ ၁ လက်မ ၏ ၃ ပုံ ၁ပုံ အထိ ရှိတတ်သည်။ လုံးခြမ်းပုံ ရှိပြီး ရွှေရောင်အမွှေးနုများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။
ရေကြည်အောင် ပြုလုပ်နည်းမှာ ရေထည့်ထားသော အိုးအတွင်းဘက် ဖင်ပိုင်းကို ခပေါင်းရေကြည်စေ့ဖြင့် တိုက်ပေးရသည်။ ထိုအခါ အစေ့မှ အဖတ်ကလေးများသည် ရေထဲသို့ ပါသွားကြသည်။ အဖတ်များများ ထွက်နိုင်အောင် စဥ့်မသုတ်ထားသော ရိုးရိုး မြေအိုးကို သုံးလျှင် ပို၍ ကောင်းမွန်သည်။ အစေ့မှ ထွက်သော အဖတ်ကလေးများသည် ရေထဲရှိ မြူမှုန်၊ ညွန်နှစ်များကို သယ်ယူ၍ အနည်ထိုင်သွားသောအခါ ရေသည် ကြည်လင်သွားသည်။
ခပေါင်းရေကြည်စေ့၏ အခွံကို အမှုန့်ပြုလုပ်၍ အန်ဆေးအဖြစ် သုံးရန်လည်းကောင်း၊ ဝမ်းကိုက် ပျောက်ဆေးအဖြစ် သုံးရန်လည်းကောင်း သင့်လျော်သည်။ ဝမ်းကိုက်ပျောက်ဆေးအဖြစ် သုံးပုံမှာ ခပေါင်းရေကြည်စေ့ခွံကို အမှုန်ပြု၍ ယင်းအမှုန် ၁၀ ဂရမ်မှ ဂရမ် ၂၀ကို ဘိန်းစေ့ တစ်စေ့နှစ်စေ့ဖြင့် ရော၍၊ အလုံးကလေးများ လုံးရသည်။ ထိုဆေးလုံးကို ၃ နာရီ၊ သို့မဟုတ် ၄ နာရီခြားတစ်ခါ တိုက်ကျွေးလျှင် ဝမ်းကို သက်သာသည်။
ခပေါင်းရေကြည်ပင်၏ အနွယ်ကိုလည်း မျက်စဉ်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သေး၏။ ရခိုင်လို ခမောင်းခါးပင်ဟု ခေါ်သည်။credit: wikipedia
အမွဲတမျး မကျြမှနျမတပျခငျြရငျ ဒီဆေးနညျးလေးကို သုံးကွညျ့ပါ…
“ ဆရာ မကျြမှနျ မပါပဲ လမျးတှလြှေောကျ။ စာတှဖေတျနဲ့ပါလား” “ကြှနျတျော မကျြစိမမှုနျတော့ဘူးဗြ” “လုပျပါဦး ဆေးနညျး ကောငျးလေး”
“ ခပေါငျးရကွေညျ အခေါကျ ( ၁၀ ) ကပျြသား လောကျကို ထနျးလကျြ ( ၃ ) လုံး ၊ ရေ မတျခှကျ ( ၉ ) ခှကျနဲ့ ရောကြိုပွီး အအေးခံတယျ… ။ ပွီးမှ အရညျ စဈယူပွီး ပုလငျးထဲ ထညျ့ထားတယျ… ။
နတေို့ငျး လကျဖကျရညျ ပနျးကနျ တဈလုံးစာ သောကျတယျ… ။ ဆေးကုနျရငျ နောကျတဈခါ စီမံပွီး မပွတျ မှီဝဲတယျ ။
˝ နောကျတဈနညျးလညျး လုပျတယျ… “အဲ့ဒါ ဖနျးခါးသီးကို အမှုနျ့လုပျထားတာ။ တဈပတျ (၂) ကွိမျ ဖနျခါးမှုနျ့နဲ့ နနှငျးမှုနျ့ စဈစဈကို ရနေဲ့ ရောစပျပွီး ညအိပျခြိနျ ကှငျးပွီး အိပျတာပဲ။ မကျြရညျ ပူကတြာ၊ မကျြစိအောငျ့တာ၊ အမွငျဝဝေါး မကျြစိမှုနျတာ မဖွဈတော့ဘူး။˝
“မကျြစိ သှေးခွတေညျ”: : ခပေါငျးရကွေညျစကေို့ သှေး၍ မကျြစိကှငျးပေးလြှငျ ထိုရောဂါ ပြောကျသညျ။ အခွားသော မကျြစိနာဟူသမြှ ထိုနညျးအတိုငျး ပွုလုပျပေးပါက ပြောကျကငျးသညျ။
“မကျြစိမှုနျ” : : ခပေါငျးရကွေညျစကေို့ သှေး၍ မကျြစိကှငျးပေးပါက မကျြစိ မှုနျဝါးခွငျး ကငျး၍ အမွငျသနျလာပါလိမျ့မညျ။
“မကျြစိ တိမျသလာ”: : ယငျးအစကေို့ ပြားရညျနှငျ့သှေးကာ မကျြစိအား ကှငျးပေးပါက မကျြစိတိမျသလာရောဂါ ပြောကျကငျး၏။
ခပေါငျးရကွေညျနှငျ့ ပတျသကျပွီး အခွားပြောကျကငျးစသေော ရောဂါမြားလညျး ရှိနသေေးပါသညျ ။ အဓိက မကျြစိရောဂါကို ပြောကျကငျးကွောငျး အရှငျနာဂသိနျဆေးကမျြးတှငျ ညှနျးဆိုသညျ။Credit: ယမငျးဖွူ,
“Flowers From Myanmarမှာ ရေးသားထားတာကိုလညျး ကောကျနှုတျဖျောပွလိုကျပါတယျ…”
ခပေါငျးရကွေညျ ဆိုသော အမညျနှငျ့ လိုကျအောငျပငျ အစသေ့ညျ “ရေ”ကို ကွညျလငျနိုငျစှမျးရှိသော အစှမျးရှိသညျ။ “ရကွေညျအောငျ ပွုလုပျနညျးမှာ ရထေညျ့ထားသော အိုးအတှငျးဖကျ ဖငျပိုငျးကို ခပေါငျးရကွေညျစဖွေ့ငျ့ တိုကျပေးပါ ။
ထိုအခါ အစမှေ့ အဖတျကလေးမြားသညျ ရထေဲသို့ ပါသှားကွသညျ။ အစမှေ့ ထှကျသော အဖတျကလေးမြားသညျ ရထေဲရှိ မွူမှုနျ၊ ညှနျနှဈမြားကို သယျယူ၍ အနညျထိုငျသှားသောအခါ ရသေညျ ကွညျလငျသှားသညျ။ ထို့ပွငျ အစဟေ့ာ မွနျမာ့တိုငျးရငျးဆေးမှာ ဆေးဖကျလညျး ဝငျလှသညျ ။ ခပေါငျးရကွေညျစေ့၏ အခှံကို အမှုနျ့ပွုလုပျ၍ အနျဆေးအဖွဈ သုံးနိုငျသလို ၊ ဝမျးကိုကျ ပြောကျဆေးအဖွဈ အသုံးပွုနိုငျသညျ။
ခပေါငျးရကွေညျပငျ၏ အမွဈ ၊ အသီး ၊ အစမြေ့ားက ဆေးဖကျဝငျလှသညျ။ website မြားမှာ ရေးသားထားသော ဆေးဝငျပုံမြားကလညျး စိတျဝငျစားစရာဖွဈပါသညျ။
တိုငျးရငျးဆေးအသုံးပွုပုံ : Ayurveda ရဲ့အဆိုအရ အစမြေ့ားသညျ acrid , alexipharmic, lithotriptic ဖွဈပွီး ။ strangury၊ ဦးခေါငျးရောဂါမြား၊ Urinary discharges ဆီးလမျးကွောငျးရောဂါမြားကို ကုသနိုငျကွောငျး သိရသညျ။ အမွဈသညျ အရပွေားရောဂါ Leucoderma ကို ကုသနိုငျသညျ။ အသီးသညျ eye diseases မကျြစိရောဂါမြား, thirst ရငေတျခွငျး, poisoning အဆိပျသငျ့ခွငျး နှငျ့ hallucinations စိတျအာရုံခြောကျခွားခွငျး စသညျ့ရောဂါမြား ကုသရာတှငျအသုံးဝငျသညျ။
အသီးသညျ emetic အနျဆေး, diaphoretic alexiteric ဖွဈသညျ။ Unani system of medicine ၏ ဆေးပညာအရ အစမြေ့ားသညျ bitter ခါးသကျသော , astringent ခြုပျသော to bowels, aphrodisiac ကာမအားတိုးဆေး။ , tonic အားဆေး , diuretic ဆီးရှငျဆေး ။ အသညျးနှငျ့ ကြောကျကပျ ရောဂါမြားအတှကျ အကောငျးဆုံးဆေးဝါး ၊ gonorrhea ကာလသားရောဂါ ၊ , colic ပွငျးထနျသော။ ဝမျးရဈနာခွငျး စသော ရောဂါမြားအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။credit: Flowers From Myanmar, https:// www. facebook. com/360042720833435/ posts/ 947281468776221/
“ဝီကီပီဒီးယားတှငျလညျး ယခုကဲ့သို့ ဖျောပွထားသညျ။”
ခပေါငျးရကွေညျကို ရုက်ခဗဒေသညာ အားဖွငျ့ စထရိခနို့ပိုတကျတိုရမျ (Strychnos potatorum) ဟုချေါသညျ။
ခပေါငျးရကွေညျပငျသညျ ရကေို ကွညျလငျနိုငျစှမျးသော အစရှေိ့ အသီးသီးသော အပငျဖွဈသညျ။ ထိုအပငျမြိုးကို မွနျမာနိုငျငံ ပဲခူးနှငျ့ တောငျငူခရိုငျမြားတှငျ အမြားအပွား တှရေ့သညျ။ အသီးတှငျ အစေ့ တဈစသေ့ာ ပါသညျ။
အပငျမှာ ရှကျကွှပေငျကွီးမြိုးဖွဈသညျ။ ပေ (၄၀) ခနျ့ အထိမွငျ့သညျ။ မီးခိုးရောငျအခေါကျရှိပွီး အခေါကျတှငျ အမွှောငျးမြားပါသညျ။
အရှကျမှာ ဘဲဥပုံ ရှညျမြောမြော ရှိ၍ အရှကျထိပျပိုငျးမှာ ခြှနျသှယျပွီး ရှကျအရငျးပိုငျးမှာ သှယျသညျ သို့ ဝိုငျးသညျ။ ရှကျပွားခြော၍ အစိမျးရငျ့ရောငျ ရှိပွီး ရှကျအနားတှငျ အတှနျ့မြားရှိသညျ။
အပှငျ့မှာ ဖွူပွီး မှေးသညျ။ ပှငျ့ညှာအလှနျသေးပွီး အပှငျ့တှငျး အမှေးမြား ရှိကာ ခေါငျးလောငျးပုံ ဖွဈသညျ။ အစမှေ့ာ တဈလကျမ၏ ၄ ပုံ ၁ပုံမှ ၁ လကျမ ၏ ၃ ပုံ ၁ပုံ အထိ ရှိတတျသညျ။ လုံးခွမျးပုံ ရှိပွီး ရှရေောငျအမှေးနုမြားဖွငျ့ ဖုံးအုပျထားသညျ။
ရကွေညျအောငျ ပွုလုပျနညျးမှာ ရထေညျ့ထားသော အိုးအတှငျးဘကျ ဖငျပိုငျးကို ခပေါငျးရကွေညျစဖွေ့ငျ့ တိုကျပေးရသညျ။ ထိုအခါ အစမှေ့ အဖတျကလေးမြားသညျ ရထေဲသို့ ပါသှားကွသညျ။ အဖတျမြားမြား ထှကျနိုငျအောငျ စဉျ့မသုတျထားသော ရိုးရိုး မွအေိုးကို သုံးလြှငျ ပို၍ ကောငျးမှနျသညျ။ အစမှေ့ ထှကျသော အဖတျကလေးမြားသညျ ရထေဲရှိ မွူမှုနျ၊ ညှနျနှဈမြားကို သယျယူ၍ အနညျထိုငျသှားသောအခါ ရသေညျ ကွညျလငျသှားသညျ။
ခပေါငျးရကွေညျစေ့၏ အခှံကို အမှုနျ့ပွုလုပျ၍ အနျဆေးအဖွဈ သုံးရနျလညျးကောငျး၊ ဝမျးကိုကျ ပြောကျဆေးအဖွဈ သုံးရနျလညျးကောငျး သငျ့လြျောသညျ။ ဝမျးကိုကျပြောကျဆေးအဖွဈ သုံးပုံမှာ ခပေါငျးရကွေညျစခှေံ့ကို အမှုနျပွု၍ ယငျးအမှုနျ ၁၀ ဂရမျမှ ဂရမျ ၂၀ကို ဘိနျးစေ့ တဈစနှေ့ဈစဖွေ့ငျ့ ရော၍၊ အလုံးကလေးမြား လုံးရသညျ။ ထိုဆေးလုံးကို ၃ နာရီ၊ သို့မဟုတျ ၄ နာရီခွားတဈခါ တိုကျကြှေးလြှငျ ဝမျးကို သကျသာသညျ။
ခပေါငျးရကွေညျပငျ၏ အနှယျကိုလညျး မကျြစဉျးအဖွဈ အသုံးပွုနိုငျသေး၏။ ရခိုငျလို ခမောငျးခါးပငျဟု ချေါသညျ။credit: wikipedia
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ဝက်ခြံတွေ၊ အပူဖုတွေ ပေါက်နေရင် ဒီနည်းတွေနဲ့လုပ်ကြည့်ပါ
Total Hits : 318626